မဗဒေါရဲ့ ဗဒေါလမျး: 12/01/2007 - 01/01/2008
Posted by mabaydar at 12:12 AM2comments :
မဗေဒါတစ်ယောက် ဘယ်ပျောက် (သို့) ရင်ကိုစွဲညှိ စေတဲ့ K-drama
မဗေဒါတစ်ယောက် ပိုစ့်အသစ်မတင်ပဲပျောက်နေလို့ စိတ်မရှိကြပါနဲ့နော်.. ပျောက်တာလဲမပြောနဲ့ ခုတလောအလုပ်နဲ့အိမ် အိမ်နဲ့အလုပ် တစ်ရက်တစ်လေအားပြန်တော့ ဖေဖေ မေမေတို့အတွက် အချိန်ပေးပြီးအပြင်ထွက်ရ.. တချို့လူမှုရေးကိစ္စတွေကရှိသေး..
ရန်ကုန်မှာအားရှိ အိမ်မကပ်ချင်လို့ အပြင်သွားဖို့ အမြဲအကြံထုတ်နေတတ်တဲ့ဗေဒါတစ်ယောက် စလုံးယောက်မှ အိမ်မှာနေချင်လှပါချီရဲ့ဆိုတာတောင် နေဖို့အချိန်မပေးနိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်.. တရုတ်ကားထဲကစကားသုံးပြောရရင် မိုးနတ်မင်းကအမြင်ကပ်ကပ်နဲ့အပြစ်ပေးတယ်ထင်ပါ့.. ဟတ်... ဟတ်...
အရင်ပိုစ့်တွေတုန်းက တခါတလေ အလုပ်ကနေ WEB TEXT EDITOR သုံးပြီးရေးရတာ.. အိမ်မှာကျတော့ mood ကမရဘူး..
ခုတလောအလုပ်ကနေပိုစ့်ရေးဖို့ကလဲ သူဌေးမလစ်ဘူးဖြစ်နေတယ်.. လစ်ပြန်တော့လဲ အလုပ်ကများလို့မရေးဖြစ်.. ခုတောင် SUNDAY သူဌေးမလာလို့.. အဟိ....
ဘလော့ကို အမြဲ UPDATE လုပ်နိုင်တဲ့ ဘလော့ဂါတွေကို လေးစားတယ်ရှင်.. မဗေဒါတော့ အဲလိုမလုပ်နိုင်သေးဝူး... လိုသေးတယ်...
မအားဆိုဗေဒါ့ ဝါသနာ ရုပ်ရှင် ဗီဒီယိုနဲ့ ဇတ်လမ်းတွဲတွေဖတ်တောင် မလှည့်ဖြစ်ဖူး..
အဲ...ဒါပေမဲ့ ဟိုနေ့က ကြည့်ဖြစ်လိုက်တဲ့ ကိုရီးယား ဇာတ်လမ်းတွဲတစ်ခုကတော့ ဆွဲသွားပြန်ပြီ.. အဲဒိကားကြည့်ပြီး အငိုကောင်းတာ နောက်နေ့အလုပ်သွားတော့ ဗေဒါ့မျက်လုံးတွေမို့လို့.. အားလုံးကဝိုင်းမေးကြတော့.. ရှက်လိုက်တာ.. နောက်မှဗေဒါရှင်းပြလိုက်တော့ "အော်.. ဖြစ်ရလေ.." ပေါ့.. ဟဲ.. ဟဲ.. ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ ငိုရတဲ့ကားတွေကို သိတ်မကြုက်ပါဘူး.. စိတ်အပန်းဖြေချင်လို့ ရုပ်ရှင်ကြည့်တာ အဲဒိအတွက် ထပ်စိတ်မဆင်းရဲချင်ဘူးလို့ ယူဆတယ်လေ.. (ရုပ်ရှင်သဘော ရသမြောက်အောင် ပါသင့်သလောက်ပါတာကိုတော့ လက်ခံပါတယ်.. ၁ကားလုံး တရွဲရွဲငိုရတဲ့ ရုပ်ရှင်တွေကို ဆိုလိုတာပါ).. ဒါပေမဲ့ ဗေဒါခုကြည့်လိုက်မိတဲ့ ကားက တစ်ကားလုံးငိုစရာချည်းပါပဲ.. ဟင်း.. မင်းသား မင်းသမီးသာမချောရင် ဆက်ကြည့်ဖြစ်ပါ့မလား မသိဘူး.. ဇာတ်လမ်းမကောင်းလို့တော့ ဟုတ်ဖူး.. ကိုယ့်အကြောင်းကိုယ်သိလို့..
ရုပ်ရှင်ကြည့်ပြီး အဲဒိဇတ်လမ်းကို ပြန်ပြန်ဝေငှတတ်တာလဲ ဗေဒါ့ဝါသနာပေါ့.. တချို့တွေကလဲ နားထောင်ရတာ သိပ်စိတ်မဝင်စားကြပါဘူး.. တချို့ကျတော့လဲ ဇတ်လမ်းကြိုမသိချင်ကြဘူးလေ.. အရသာပျက်တယ်လို့ထင်ကြတယ်.. ဒါပေမဲ့ ဗေဒါကတော့ ကြည့်ပြီးတဲ့သူ ပြန်ပြောပြတာကို နားထောင်ရတာလဲ ကြိုက်တယ်.. ဗေဒါကြည့်ပြီးရင်လဲ ပြန်ပြောပြချင်တယ်..
ဒီတော့ ဗေဒါ့ ဘလော့မှာ ရေးပြီးတော့ပဲ ပြန်ပြောပြတော့မယ်.. စိတ်ဝင်စားရင်လဲ ဆက်ဖတ်.. မဝင်စားတဲ့သူလဲ ဖတ်နဲ့တော့.. ဗေဒါတော့ အားမနာတမ်းပြောပြီ... ဟီး.. ဟီး..
ဇာတ်လမ်းနာမည်က "HWANG JIN YI" တဲ့.. ၁၆ရာစုနှစ်လောက်က နာမည်ကြီး gisaeng ၁ယောက်ရဲ့အကြောင်းပေါ့.. gisaeng ဆိုတာ ဂျပန်က ဂေးရှာတွေလိုပဲပေါ့.. အဲဒိမိန်းကလေးတွေက ငယ်ငယ်ထဲက အဆို အက အတီး နဲ့ တခြားမိန်းမတို့တတ်အပ်တဲ့ပညာတွေကို ကောင်းစွာသင်ကြားခဲ့ရပေမဲ့ အရွယ်ရောက်တဲ့အခါကျရင်တော့ အရာရှိအရာခံတွေရဲ့ ဖျော်ဖြေရေးနဲ့ အသုံးတော်ခံတွေပေါ့.. (အသုံးတော်ခံဆိုတာ ဘာကိုဆိုလိုလဲ စာဖတ်သူ ကိုယ့်ဘာကိုယ်ပဲ သဘောပေါက်လိုက်နော်.. ဗေဒါလဲပြောပြတတ်ဝူး...)
အဲဒိခေတ်က လူတန်းစားခွဲခြားတဲ့ အချိန်တွင်းမှာ ဆင်းရဲတဲ့တချို့မိန်းကလေးတွေက အဲဒိအလုပ်ကိုဝင်လုပ်ကြတယ်.. ဒါတောင် လုပ်ချင်တိုင်းလုပ်လို့ရဝူး. ရုပ်ရည်ရှိရတယ်.. talent ရှိရတယ်..
gisaeng ကမွေးတဲ့ကလေးကလဲ gisaeng ပဲလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ ဥပဒေရှိတယ်.. ပြီးတော့ gisaeng တွေကိုတရားဝင် လက်ထပ်လို့မရဘူး (stupid law).. အဲဒါကြောင့် ဟွမ်ဂျင်းရိ ရဲ့အမေက သူ့သမီးကို မြို့စွန်ကဖုန်းကြီးကျောင်းမှာ ခဏအပ်ထားခဲ့တယ်..
ဒါပေမဲ့ဖြစ်ချင်တော့ သူအမေကိုတွေ့ချင်လို့လိုက်ရှာရင်း ဟွမ်ဂျင်းရိတယောက် gisaeng တွေရဲ့ ဖျော်ဖြေရေးအကကို တွေ့ပြီး အရမ်းသဘောကျပြီး သင်ယူချင်လာတယ်.. အဲဒိအချိန်မှာလဲ gisaeng အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဟာ သူ့အဖွဲ့မှာ သူ့ကိုဆက်ခံနိုင်မဲ့ talent ရှိတဲ့ တပည့်တစ်ယောက် လိုချင်နေခဲ့တယ်.. ဒီလိုနဲ့ သူ့အမေတားတဲ့ကြားက ဟွမ်ဂျင်းရိ အဖွဲ့ထဲဝင်ဖို့လက်ခံခဲ့တယ်.. သူ့အမေနဲ့လဲ အဲဒိမှာပြန်တွေ့တယ်.. သူအမေက ဒီအလုပ်ရဲ့အကျိုးဆက်ကိုသိတယ်လေ.. အရွယ်ရောက်လို့ချစ်တဲ့သူနဲ့ လက်ထပ်လို့မရပဲ စိတ်ဆင်းရဲရမှာကိုလဲ မလိုလားဘူး.. သူကကိုယ်တွေ့ကိုး.....
သူ့အမေပြောတိုင်း သူယောကျာင်္းမယူဘူး.. စိတ်လဲမဝင်စားဘူး လို့ပြောခဲ့တဲ့ ဟွမ်ဂျင်းရိ ၁ယောက် အသက်၁၉နှစ်မှာ အချစ်ဦးနဲ့ စတင်တွေ့ခဲ့ရပြီ...
မြို့စားကြီးရဲ့သား ကင်အွန်ဟိုဆိုတဲ့ ကောင်လေးက ဟွမ်ဂျင်းရိ ကိုမြင်မြင်ချင်းချစ်မိသွားပြီး မရမကကျိုးစားပြီးလိုက်ခဲ့တယ်.. သူ့ရဲ့စစ်မှန်တဲ့အချစ်ကြောင့် ဟွမ်ဂျင်းရိ နဲ့မေတ္တာမျှခဲ့ကြတယ်.. သိတဲ့အတိုင်းပဲလေ GISAENG ကယောကျာင်္းယူလို့မရတဲ့အထဲ NOBLEMAN နဲ့ဆိုတော့ ချစ်ခရီးကြမ်းပြီပေါ့.. ဒါပေမဲ့ ဟွမ်ဂျင်းရိ ခေါင်းမာထက်မြက်ပြီး အချစ်အတွက်အရာရာကို စိန်ခေါ်စွန့်လွှတ်ရဲခဲ့ပေမဲ့.. သူတို့၂ယောက် တူတူထွက်ပြေးမဲ့နေ့မှာ ဟွမ်ဂျင်းရိ ဆရာမရဲ့သတင်းပေးမှုကြောင့်အွန်ဟိုကို သူ့အမေမိသွားပြီး သူသေမှသွားရမည်ဆို၍ မိုးရေထဲဒူးထောက်တောင်းပန်းရင်း မနက်ရောက်တော့ အွန်ဟို၁ယောက် အသည်းအသန်ဖျားကာ အိပ်ရာထဲ ဘုန်းဘုန်းလဲတော့သည်.. ဟွမ်ဂျင်းရိ ဘက်မှာလည်းပြန်ဖမ်းမိ၍ အပြစ်ကိုခံယူနေရသည်.. ခြိမ်းထားပြီးရောက်မလာသည့် ချစ်သူကိုလည်း စိတ်ဆိုးနေခဲ့သည်.. အွန်ဟိုသတိပြန်ရတော့ နေမကောင်းသည့်ကြားမှ ချစ်သူဆီအရောက်သွားခဲ့သော်လည်း.. အထင်လွဲကာနေသော ချစ်သူ၏ဖြတ်ခြင်းကိုခံလိုက်ရသည်.. ဤသို့ဖြင့် မိဘအသိုင်းဝိုင်းကိုလည်းမလွန်ဆန်နိုင် ချစ်သူကိုလည်းအလွန်မြတ်နိုးတဲ့ အွန်ဟိုခမျာ စိတ်ထောင်းကိုယ်ကျေဖြစ်ပြီး နောက်ဆုံးအသက်ဆုံးတဲ့အထိပါပဲ (ငိုလိုက်ရတာ မပြောနဲ့ မျက်လုံးမို့တာ အဲဒါကြောင့် ပြောရင်း ငိုချင်လာပြီ..မယုံရင် ကြည့်ကြည့် ဗေဒါမပြောလိုက်ရတဲ့ အခန်းတွေများကြီး ကျန်သေးတယ်.. ဒါတောင် အတိုချုံး ပြောလို့)..
ချစ်သူနဲ့သေခွဲခွဲခဲ့ရအောင်လုပ်တဲ့ အထက်တန်းစားတွေနဲ့ သူ့ဆရာမကို ဟွမ်ဂျင်းရိ အမုန်းကြီးမုန်းပြီးကလဲ့စားခြေမယ်လို့ ကြွေးကြော်ခဲ့ပါတယ်.. သူမဘယ်လိုကလဲ့စားခြေမလဲ? ဘယ်လိုအခက်ခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရအုန်းမလဲ? သူမရဲ့ချစ်ဇာတ်လမ်းဒီမှာပဲဆုံးပြီလား? အချစ်သစ်နဲ့တွေ့အုန်းမလား? နောက်တစ်ကြိမ် အချစ်ရေးကံခေအုန်းမှာလား? ဆိုတာတွေကိုတော့ စိတ်ဝင်စားရင် ကြည့်ကြည့်ပေါ့ကွယ်.. ဗေဒါကြည့်တာလဲ အပိုင်း၁၄ထိပဲရှိသေးတယ်.. ပြီးသေးဝူး.. ၂၄ပိုင်းရှိတယ်..
ဟွမ်ဂျင်းရိ အဖြစ် Ha Ji Won (100 days with mr.arrogant)
ကင်အွန်ဟို အဖြစ် Jang Geun Suk (one miss call)
Kim Jung Han(HJY's 2nd love) အဖြစ် Kim Jae Won(100days with mr.arrogant,wonderful life, my love pazzi)
and many more handsome man and pretty girls....
ကဲ..... ဒါဆိုရင်တော့ဗေဒါ ပိုစ့်အသစ်မရေးဖြစ်ပဲ ဘာတွေလုပ်နေလဲ သိပြီပေါ့နော်.... ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲ..
Posted by mabaydar at 2:23 PM3comments :
Labels: Drama , ရုပ်ရှင်
Posted by mabaydar at 4:05 PM 1 comment :